Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa fi Ameerikaa Wal Ga’ii Lammataaf Veetnaam Seenaniiru
Guraandhalaa 26, 2019
Walga’iin marsaa lammataa Prezidaantii Yunaayitid Isteetis – Doonaald Traampii fi hoogganaa Kooriyaa Kaabaa – Kiim Jong Un gidduutti geggeessamu, Roobii boruu, biyya Veetinaam, magaalaa Hanoo’i keessatti jalqabamuuf jira. Yeroo hoogganoonni lameen walga’uuf qophaawaa jiranitti, jiraattonni magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa immoo walga’ii kana irraa maal akka eegan dubbataa jiran.
Wal ga’ii Yunaayitid Isteetis fi Kooriyaa kaabaa lammataa Veetnaam keessatti geggeessamuuf jiru kanaaf qopheen Hanooyii keessatti itti fufee jira.
Kooriyaa Kaabaa Nukleras irraa walaba gochuuf akka walii galtee baatii Waxaajjii waggaa darbe Singaapoor keessatti irra ga’ameen mariin prezidaant Doonaald Traampii fi hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un gidduutti geggeessamu Roobii borii qabee itti fufa.
Prezidaant Traamp Waayit Haawus irraa torban darbr ibsa kennaniin akka jedhanitti marii geggeessamuuf jiru irraa abdii qabaachuu dubbatan.
Traamp akka jedhanitti torban dhuftu kun gammachiisaa ta’uuf deema. Yoo xiqqaate xumura irratti nukilera irraa walaboomuu inni jedhu hojii irra oola jedheen abdadha.
Ba’iin wal ga’ii kana irraa argamu jireenya uummata odola sanaa kan kallatiin dhiibbaan irratti qabaatu jiraattonni See’ool waa’ee wal ga’ii geggeeffamuuf jiruuwaa hedduu jedhan qabu.
Jiraataa See’ool kan yeroo dheeraa fi lammii Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa kan ta’an Wiliyaam Choo akka jedhanitti gumii Haanooyii kana irraa maal akka argamu beekuu baadhus garuu ilaalcha gaariin qaba jedhan.
Uggura tokkummaa mootummootaa fi mana mareen irra kaa’amee jiru ofi irraa kaasuuf waa dhiyeessuu qabu. Namoonni hangi tokko garuu waa tokko iyyuu hin godhan jedhanii yaadu. Bu’aa irraa argatu waan ta’eef garuu nukileraaf jedhanii bu’aa dhabuu hin qaban jedhu Choon.Waldaa walabummaaf dubbi himaa kan ta’an Kim
Sang-jin kooriyaan kaabaa dubbii tuqachaa ba’uu ishee qeeqanii fooya’inni waggoota 70 keessatti Piyoongyaan keessatti argames xoqqoo dha jedhan. Kooriyaan kaabaa nuklerra irraa walaba ta’uu ishee mul’inatti beeksisuu qabdi jedhan.